Mareykanka oo ciidamadiisii ugu dambeeyay kala baxay Ciraaq – Radio Daljir
Mareykanka oo ciidamadiisii ugu dambeeyay kala baxay Ciraaq
Diseembar 18, 2011 12:00 b 0
Bagdaad,Dec,18 – Ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanka ayaa ka baxay dalka Ciraaq, waxaana ka bixitaankani uu soo afjarayaa joogitaankii militeriga Maraykanka ee dalkaasi Ciraaq, iyadoo Maraykanku uu 9 sano hawlgalo iyo olole dagaal halkaasi ka waday.
Baabuurta ciidamada lagu daabulo ayaa saaka oo Axad ah lagu arkayey iyagoo ka talalabaya xadka wadanka Ciraaq uu la wadaago dalka Kuwait.
Ilo wareedyo laga helaayo saraakiil Mareykan iyo Ciraaqiyiin ah ayaa sheegaya in maanta lasoo afjarayo guud ahaan joogitaankii Mareykanka ee Ciraaq.
Madaxwaynaha Mareykanka Brack Obama ayaa dhawaan shaaciyay ciidamada wadankiisa kasocday ee joogay dalka Ciraaq inay halkaasi ka bixi doonaan,waxaana hadalkaasi uu sheegay xilli uu la kulmayay ra’isal wasaaraha dalka Ciraaq mr Nuuri Al-Maaliki.
Dowladda Mareykanka ayaa ku duushay dalka Ciraaq sanadkii 2003-dii,waxaana duulaankaasi uu ka dambeeyay kadib markii Mareykanka uu sheegay dowladdii Ciraaq ee xilagaasi uu hogaaminayay Saadaam Xuseen inay haysato hubka Nuclearka.
Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay kaga dhinteen dalka Ciraaq 4,500 oo askari,iyadoo ay kaga dhaawacmeen 32,000,halka boqolaal bilyan oo doolarka Mareykanka ahna lagu bixiyay qarash ahaan dagaalkaasi.
Joogitaanka militeriga Maraykanka ee dalka Ciraaq ayaa markii ugu sareeysay oo ahaa sanadkii 2007dii gaadhay ilaa 170,000 askari ,iyadoona ciidamadaasi ay fariisin ku lahaayeen shan boqol oo saldhig.
Maraykanka ayaa iminka waxaa Ciraaq ka jooga 157 askari oo masuul ka ah illada saafarada Maraykanka iyo ergada Diblamaasiyiinta.
Kadib ka bixitaanka Mareykanka ee dalka Ciraaq,waa halkee halka uu sida gaarka Mareykanku uu diiradda u saari doonaa?!,waa su’aalaha ugu badan ee xiligaan taagan,waxaan qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ay sheegayaan kadib ka bixitaanka Mareykanka ee dalka Ciraaq Mareykanku inuu indhaha ku hayo ururka Al-Qaaciadda ee Waqooyiga Afrika,Yemen iyo Soomaliya.
Cabdirashiid Muuse Saciid
Ergooyinkii dhexdhaxaadinta ka waday beelihii ku dagaalamay miyiga degmada Rako oo ka hadlay natiijadii kasoo baxday heshiisiinta beelaha.
Baahin: Sabti, Dec 17, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Garowe. Wufuud ka socota QM, EU, AU & IGAD oo shirar wadatashi ah la yeeshay madaxada dawlada federaalka; Shir Cadaado uga socday 9 maamul goboleed oo lagu iclaamiyey in lagu dhiso hal maamul; Xil. Siciid Diiriye oo afduub siyaasaded ku tilmaamay xil ka qaadista afhayeen Shariif Xasan.